Bilxiginnaan Lola TPLF Sodaattee Gargaarsaaf Ameerikaatti Boo’aa Jirti – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBilxiginnaan Lola TPLF Sodaattee Gargaarsaaf Ameerikaatti Boo’aa Jirti
Source: Wallo Post, Fulbaana 16, 2021
Xalayaan madda qoosaa fakkaatu, kan kadhaaf watwaannaa of keessaa qabu qindeessuummaa mootummaa Itoophiyaatiin gara Ameerikaatti barreeffamuuf akka jiru gabaafamaa jira.
Akka maddeen irraa odeeffannetti xalayaan kun kootii kofalchiisaa kan fakkaatu “poostaa adii masaraa mootummaa adiif” kan jedhuun kan barreeffamaa jiru akka ta’e gabaafame.
Xalayaan kun akka mootummaan Itoophiyaa ibsaa jirutti, miidhaa qaamolee TPLF’n raawwate Ameerikaatti ibsuuf kan gargaarudha jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa humna Juntaa jedhee waamu garee TPLF haleelaa akka jiru ibsaa turee ibsaas jira. Gama kaaniin akka Xalayaa qindaa’aa jiru kana irraa argamutti ammoo kasaaraa TPLF irraan gahaa jiran damdamachuuf watwaannaaf dirmannaa biyyoota alaaf akka isa qopheessutti yaadaa jiraachuudha kan hubatamu.
Mootummaan Itoophiyaa gaggeessummaa Abiyyi Ahmad jala jiru humni waraanaa TDF injifatamee akka naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessaa bahaa jiru gabaasee torbee osoo hin guutin duula dirmannaa kana taasisuuf sagantaa baafate.
Gabaasa wal dhahaan kan beekamu miidiyaan Itoophiyaa gartuu mootummaa qofaaf dhaabbatan, miidhaa TPLF irraan gahamaa jiru gabaasaa, karaa biraan ammoo TPLF nu miidheera jedhanii boohicha jalqabuun haleelamaa akka jiran saaxila kanneen jedhan illee jiran.
Duula “Xalayaa adii gara masaraa mootummaa adiif!” Jedhu kun akka Itoophiyaa naannoo sabaaf sab-lammoota kibbaa keessatti eegaletti gabaasaa jiran. Duula kana irraa dargaggoota miliyoona 5 akka hirmaatan abdiin eeggatu qondaalonni mootummaa.
Kanneen yaada kana akka kolfaaf qoosaatti ilaalaa jiran ammoo duula boohichaaf dirmannaa biyyoota adiif gaggeefamu irraa qooda hin fudhannu jedhu.
Kello Media: Walii Galteen WBO fi TPLF
Walii galteen WBO fi TPLF gidduutti ta'e Bu'aan isaa fi Miidhaan isaa maali? | KELLO…
Siin caalaa kan boo’uu jira? Alabaa ykn Asxaa ABO’f fi Alabaa TPLF fudhattani White house fuldura, daandii cuftanii ciisuun, dhabbata gamtoomanni new York jiru fuldura ciisuun akka harree gaggalachun akka saree cilee ykn daara barbaaddu gaggalachun isuma kessaa baatanii TPLF waliin bahuu miti yaadun keessaa dogoggora bira darbee gantumma kessaan agarsiisa.